Teeth Healthy | Best Way to whiten Ezé Guide
posts akpado "ezé gbasiri ike"
Na-ezé gị nwere ike na-a otutu ego ma na-ewe. E nwere ọtụtụ ụzọ na technology maka zuo taa na-whiten ezé na ike nso n'ebe na ndị niile eke ịgba akwụkwọ na nnọọ ọhụrụ ke technology.This hụ onye na-agụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ pụtara ezé-enwu gbaa Atụmatụ na-arụ ọrụ ngwa ngwa na n'ụzọ dị irè.
N'ihi na ihe ndị kasị pụta, hụ dọkịta enwu gbaa ọrụ. Ha nwere ike ịbụ na-a ole na ole obere nleta, na dị ịrịba ama na ya pụta ga-adịgide adịgide na-anya gara. The ezé whitening mixtures na gị ụlọ nwere ohere na-adị nnọọ irè karịa ihe i nwere ike ịhụ na gị na mpaghara ọgwụ ụlọ ahịa.
NDỤMỌDỤ! Ịnọgide na-enwe acha ọcha, Cleaner ezé, mgbe eze na-cleanings bụ a kwesịrị. Jide n'aka na-na-na gị isii n'ọnwa emek site n'ịhazikọta ọtụtụ oge tupu.
A ole na ole eze-eleta ezé gị acha ọcha. Ụlọ nwere ike iji whitening ezé usoro a na-apụghị zụrụ n'elu-azụrụ n'onwe.
Ị nwere ike iji strawberries na whiten ezé gị. The organic-eme ka elu nke strawberries nwere ike inyere whiten ezé gị na-enweghị aka ike ọgwụ. Puree strawberries-eme ka a arụrụ n'ụlọ ntacha eze, ma ọ bụ ete ọhụrụ strawberries na na gị ezé.
NDỤMỌDỤ! raw oriri, karịsịa mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri na-gị ezé gbasiri ike. Esichara na erighị ezigbo nri ọ bụghị nanị na-atụgharị ezé gị odo, ma pụkwara ime ka cavities.
Lemons na oroma enye gị vitamin C, ma ha nwekwara ezé-whitening properties.Rub ka ime bee megide ezé gị maka a aghụghọ enwu gbaa mmetụta. I nwekwara ike ịgbakwunye otu obere bit nke nnu na peels iji melite anya na ya pụta na usoro a ga-ewetara.
Jiri ntuziaka gụnyere na enwu gbaa na ngwaahịa. kama, ọ pụrụ ime ka chịngọm na ọnụ iyatesịt, na ọbụna ime ka oke eze mmebi. Jiri ezé whitening na ngwaahịa kpọmkwem na naanị dị ka a gwara na ngwugwu.
NDỤMỌDỤ! A mfe ma dị irè eke umi bụ mmiri soda. Weere mmiri, ọ pụrụ inyere whiten ezé gị.
The mbụ ihe dị mkpa mgbe na-agbalị ịnọgide ezé gị na-na-kwesịrị ekwesị eze cleanings. Bilie gị ezé kpochara ọ bụla ọnwa isii ma na-eme gị n'ọdịnihu oru mgbe ke ụlọ ọrụ maka gị ugbu a ihicha.
Ihe kacha mma i nwere ike ime maka inwe acha ọcha ọnụ ọchị bụ ka agakarị n'ụlọ gị dọkịta ezé maka cleanings. Routinely ịtọọ oge a cleanings ugboro abụọ kwa afọ. Mgbe gị na-eme na a ihicha, melite gị esonụ oru ya ka ị ghara ichefu. Bilie gị ụlọ ọrụ na-enye gị a na-echetara site na ekwentị.
NDỤMỌDỤ! Ezé whitening ntacha eze bụ n'ezie bụghị ọtụtụ dị iche iche si mgbe nile ntacha eze. Ọ bụghị n'ezie ndị kasị mma echiche na-eri ego na na ngwaahịa na-agaghị eme ka ukwuu nke a dị iche.
Eri ahụ ike ihe oriri; ndu oriri dị ka mkpụrụ osisi gosikwara anyị. Ịnọ n'ebe ndị a iche iche nri iji hụ na gị Ezé ike ezé. I kwesịkwara zere snacking mgbe aiming maka a mara mma ọnụ ọchị.
Aṅụ site ahịhịa bụ otu n'ime ọtụtụ obere aghụghọ nke nwere ike inyere ịnọgide na-enwe acha ọcha ezé. Ọ bụrụ na ị na-eji a ahịhịa, mmiri mmiri bụ obere yiri ka abịa na kọntaktị na elu nke ezé gị. The mmiri mmiri ga uzo ezé gị na-aga ala gị akpịrị.
NDỤMỌDỤ! Iji nweta ihe ma na-enwe acha ọcha ezé, abọ na floss ezé gị ụbọchị ọ bụla aghaghị. Ọ bụrụ na i mee nke a, ọ ga-tufuo Mee elu nke ihe e dere ede na-akpata ezé achagharị.
Ọ na-ọma akwukwo eziokwu na sịga ọkụ emepụta site ese ụtaba discolors ezé gị oge ọ bụla ị eloda.
Inwe whitening mere site gị dọkịta ezé n'ezie na-adabere na otú ngwa ngwa ị chọrọ nsonaazụ, na otú nnọọ ezé gị e ntụpọ. Ọ bụ ezie na a ga-enwe ihe dị oké ọnụ, ị nwere ike ejedebe na quicker, ebube karị pụta karịa i nwere ike isi na ya gafere ọzọ whitening usoro.
NDỤMỌDỤ! Mmanya uhie connoisseurs, karịsịa ndị na-imbibe mgbe nile, agbasaghị nwere nha nha achagharị. The red wine na agba na-etinye obi gị dum n'ime ezé si Enamel nke na-eme ha darker.
Mgbe toothpastes na whitening ezé pastes na-eju anya similar.You adịghị mkpa na-eji a ngwaahịa nke na-adịghị agbanwe whiteness na ezé gị. Ị ga-imefusị oge gị na ego si na-adịghị enye gị a uru.
Ọ bụrụ na ị na-aṅụ sịga, mgbe ahụ ị ga-akwụsị inwe ohere ọ bụla nke whitening ezé gị. A ọkachamara enwu gbaa usoro na-efu a dị ịrịba ego nke ego. Ọ bụrụ na ị nwere ndị dị otú a usoro mere na mgbe ìhè sịga, ị wụfuru na ego efep. The enwu gbaa ga-ngwa ngwa nwesịrị site na ise siga.
NDỤMỌDỤ! Ọ dị mkpa ka abọ, chịngọm ịhịa aka n'ahụ, na floss ugboro abụọ n'ụbọchị ọ dịghị ihe ọzọ. Brushing na flossing esonụ ọ bụla nri na nri nwere ike inyere gị ezé-anọ na-acha ọcha.
-Asa ezé nri mgbe eri bụ akụkụ dị mkpa nke na-edebe ha si discoloring. Nke a bụ maa ezi mgbe ọ na-abịa kọfị.
Gwa onye gị na dọkịta ezé maka a whitening jel na ị ga-eji n'ụlọ brighten gị ọnụ ọchị. Nke a na usoro-agụnye dọkịta ezé-enye gị a ọnụ tree na ị ga-jupụta na jel na-emetụta ezé gị maka a ụfọdụ ego nke oge kwa abalị ruo ọtụtụ izu. Ọ na-kwuru nke a na Usoro nwere ike whiten ọnụ ọchị gị ruo asatọ shades chawapụrụ.
NDỤMỌDỤ! Ọ bụrụ na ị nwere ugbu a ime, kwụsị iji ihe ọ bụla ụdị ezé whitening na ngwaahịa! ndị a na ngwaahịa’ Efrata nwere ike ịbụ na-emerụ gị na-eto eto na nwa. Whitening toothpastes ndị na-emekarị na na na-eji n'oge ime, ma jụọ dọkịta gị ma ọ bụ dọkịta ezé iji jide n'aka.
Onye nke kasị mma ụzọ iji hụ na gị ezé bụ site nwere mgbe emek maka na ịga na dọkịta ezé ọcha ha.
Agbalị iji a mouthwash na specializes na enwu gbaa. Ọ nwere ike iwe ọtụtụ ọnwa iji nweta pụta. Ndị a mouthwashes nwere a whitening chemical-akpọ hydrogen peroxide. Ọ bụ nnọọ mfe iji. Nanị itucha na ya ugboro abụọ n'ụbọchị ruo ihe dị ka ọkara otu nkeji tupu ị asa ezé gị.
NDỤMỌDỤ! Flossing dị mkpa. Flossing enyere tufuo ihe e dere ede, nke nwere ike ime achagharị ezé gị.
Eri apụl bụ oké ụzọ na-enye gị ezé nro nke ịbụ acha ọcha karịa ha n'ezie nwere. Crunchy oriri na akwụkwọ nri nwere abrasive àgwà nke pụrụ inyere gị ọcha ezé gị na-enweghị na nnukwu mmebi na gị Enamel.
Whiten ezé gị na mgbe ochie ụzọ site rubbing ha na ukpa osisi n'ụgbụgbọ. Rubbing a na ezé gị juputara ọcha ha na-eme ka ha acha ọcha. Jide n'aka na-itucha ọnụ gị mgbe eji n'ụgbụgbọ, na mgbe ahụ abọ.
NDỤMỌDỤ! -Aṅụ ibu quantities nke mmiri ara ehi oriri. Oriri dị ka mmiri ara ehi, cheese na bred nile nwere mineral ndị nwere ike inyere-enye gị ike, mara mma ezé na ị chọrọ.
Ị nwere ike ide hydrogen peroxide na-whiten ezé gị. I nwere ike ime nke a nanị site na-azọnye a washcloth ma ọ bụ ihe ọ bụla owu ihe onwunwe tinye n'ime ihe ngwọta. -Ete ndị mmiri ákwà n'elu ebe gị ezé mgbe ị na na na ịbịanyụ abịanyụ ya. The peroxide ga-arụ ọrụ iji mee stains na ákwà na-enyere ebuli ha.
Jiri n'ọnụ mmiri epupụta na oroma peels-eme ka a ezi ntụ ntụ. Tinye mmiri ka a ntụ ntụ na ahịhịa na a ngwakọta. Na mgbakwunye na whitening ezé, a ga-enyere iji gbochie ọrịa agbụ na cavities.
NDỤMỌDỤ! N'ụgbụgbọ si a ukpa osisi nwere ike ji mee ka a ezé whitener. Rubbing n'ụgbụgbọ gafee eze na-ebupụta ga-eme ka ọ na-ebuli stains na acha film gị ezé.
Ọ bụrụ na ezé gị si agba ewute g i, ịkpọ gị dọkịta ezé maka nhọrọ. Ụfọdụ ndị na-eche whitening ezé bụ a kemmefu emefu, ezie na ọ bụrụ na-enwe anya na-acha ezé amalite emetụta otú i si ebi ndụ, o nwere ike ịbụ kwesịrị ya n'ihi na ọ nwere ike mee ka i nwekwuo obi.
Tupu ị nwaa ezé whitening na gị onwe gị, eme mgbe nile ka n'aka na-ịkpọ gị dọkịta ezé mbụ. Mgbe ụfọdụ, ezé mgbachu Enwere ike idozi ya site n'ịkpa a mma ọcha na ịdị ọcha. Gwa onye gị na dọkịta ezé ga-ekwe omume site na iji whitening na ngwaahịa. Gị dọkịta ezé nwere ike ikwu na ị na iji mara ma dị n'ọnụ gị bụ na ọnọdụ na-amalite iji ndị a na ụdị ngwaahịa. Cavities ma ọ bụ ọrịa agbụ ga na-adịkwa njọ ma ọ bụrụ na ị na-eji a ezé whitening ngwaahịa on ha.
NDỤMỌDỤ! Gị mkpa izere kọfị na tii ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọgide na ọnụ ọchị gị na-acha ọcha. -Aṅụ oké ichekwa ike, oge n'aga, ime ka ịrịba staining.
Ọ bụrụ na ị chọrọ acha ọcha ezé, etinye ka uwe agha Vaseline ka ezé gị. O nwere ike a mma flavor, ma, ọ ga-enye a na-echebe ihe mgbochi n'agbata ezé gị na stains ruo ọtụtụ awa.
Mgbe ị na-eri, -ata ụfọdụ chịngọm na-enyere whiten ma hichaa ezé gị. Ụfọdụ ịta goms na-karịsịa na-emepụta na-whiten ezé, na-na-na-ha ọcha. Ndị a goms Njirimara Unyi-alụ ọgụ Efrata na ga na-ezé gị na-egbuke. Ịta chịngọm na emeputakwa eke asu nke ga-enyere asa nri ọ bụla ahụ si ezé gị.
Yellow ezé bụ mfe kwesiri ngosi ịrịba ama nke onye na-ese siga nso. O nwere ike ịbụ kama siri ike na-ezé na-acha ọcha ọnụ ọchị ma ọ bụrụ na ị na-aṅụ sịga. Ọ bụrụ na ị na-aṅụ sịga, ị kwesịrị ị na maa belata otú ihe ị na-aṅụ sịga na-erite uru ahụ ike gị na ọnụ ọchị gị.
Gwa onye gị na dọkịta ezé ma ọ bụrụ na ọ nwere ike inye gị a jel nwere ike tinye n'ọrụ n'ụlọ enwu gbaa kit. Usoro a nwere ike whiten ezé gị site ruo asatọ shades chawapụrụ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ezé gị na-acha ọcha, ị kwesịrị ị na-enwe mgbe nile eze ihicha emek. Mgbe eze na-cleanings na-n'etiti ndị kasị dị irè ị ga na-etinye gị ezé whitening Usoro. Mkpa ka ị gara na gị dọkịta ezé ọ dịghị ihe ọzọ ugboro abụọ a afọ.
Whitening mm uo ozi dị ka whiten ezé gị acha ọcha. Ị nwere ike ịzụta a mm uo ozi na ọgwụ na-echekwa na ha dị ọnụ ala karịa ịlụ ezé gị whitened site a dọkịta ezé. Ọ bụrụ na ezé gị anya adịghị mma ma ọ bụ dị nnọọ discolored, unu na-dọkịta ezé mbụ.
Asa ezé gị n'elu aza elu, na ka anya dị ka ị chọrọ ịlaba ịhụ ezé gị ga-esi acha ọcha.
Mouthwash nwere ike n'ezie na-akwalite achagharị ezé gị discoloration.Ask gị dọkịta ezé ma ma ọ bụ na i nwere ezé nwere ike idi nsogbu ndị na-eji mouthwash.
Nwụrụ peroxide bụghị a mma n'ụzọ na-whiten ezé. Ọ bụ nwedịrị ike ịta na pụrụ n'ezie na-ahapụ gị ezé na-ozokwa discolored. Zere niile na ngwaahịa na nwere hydrogen peroxide ma ọ bụrụ na ezé gị na-adịghị ahụ ike.
Ọ na-ukwuu na-atụ aro na ị ezé gị whitened n'ihu na-waya braces.You ga-ecstatic mgbe ị na-ahụ ọhụrụ gị ọnụ ọchị ebe ọ bụ na ọ bụ kwụ ọtọ ma mma ọnụ ọchị!
Ụlọ nwere ike iji ọkachamara bleaching bekee na a pụrụ iche ọkụ na ike whiten ezé dị ukwuu dị ka 15 shades nnọọ ngwa ngwa. Nke a na ụdị usoro ga na-emekarị na-eri gburugburu ise narị dollar a nnọkọ.
Ọ bụrụ na ezé gị mgbe niile anya dull ma ọ bụ odo, -atụle ma ọkacha mmasị gị ọṅụṅụ nwere ike ịbụ na-ata ụta. Mmanya uhie na kọfị na-mara n'iku ezé. Jiri a ahịhịa mgbe na-aṅụ ndị a na-aba n'anya na-amachi kọntaktị oge na ezé kọntaktị.
Ime ka gị onwe strawberry ntacha eze maka brushing ezé. Strawberries bụ a whitening utịp ke ezé gị. Mix ụfọdụ tapawa onwe gị, ikpokọta mmiri (1/4 cup), ntụ iji koo achịcha (1/2 cup) na atọ strawberries na e gwere.
Ị pụrụ ime ka ezé gị nwere a acha ọcha anya site yi ihe kwesịrị ekwesị ndo lipstick agba. Bright-acha ọbara ọbara lipstick ga-eme ka discolored ezé n'ihi na ha ga na-ele anya darker. The kasị mma na agba maka discolored Ezé pinks ma ọ bụ ịgba ọtọ shades.
Na-acha ọcha ezé ị chọrọ nwere ike ịbụ oké ọnụ na dịtụ nke a hassle. E nwere ọtụtụ ụzọ dị iji nye aka ná mgbalị gị nke na-acha ọcha ezé. Gbasoo aro ẹkenịm ebe a, otú i nwere ike whiten ezé gị na-enweghị na-usoro mere professionally dọkịta ezé.
Ihe site whiten Ezé Guide - June 5, 2016 na 12:44 AM
Categories: Whiten Ezé Atụmatụ Tags: dazzle ọchị, ọnụ ọchị dazzle, ezé gbasiri ike, ezé odo, vitamin C